Wednesday April 11, 2018 - 15:27:51 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Farmaajo ayaa kusoo galay doorashada balanqaadyo been isku baddalay ugu dambeyn, haddaba Warbaahinta Arlaadi waxa ay kuusoo gudbineysaa 10 ballanqaad oo Farmaajo uu sameeyay, kuwaas oo aan dhaqan gelin.
1– Waddo xiran ma jiri doonto
2- Madaxda dalku isma qilaafi doonto
3- Nidaamka garsoorka iyo caddaaladda ayaan hirgelin doonaa.
4- Magaalada Muqdisho muddo gaaban ayaan ku xasilin doonaa
5- Musuq-maasuqa ayaan la dagaalami doonaa
6- Xildhibaan kasta waxaan u sameyn doonaa xaafiis u gaar ah oo uu ku shaqeeyo
7- $100,000 ayaan siin doonaa qofkii qarax soo sheega
8- Magdhaw ayaan siin doonaa ganacsiyada Alshabaab burburiso
9- Waxaan yareyn doonaa safarrada dibadda.
10- In Dalku si dimoqraaddiyad loo siman yahay uu u maamuli doono.
dhammaan balanqaadyadan waxa ay noqdeen bar kuma taal iyo beydna run kama ahan, taas oo soo de dejin karta fashil siyaasadeed oo soo wajaha dowladda madaxwayne Farmaajo.